“आमाकै देन हो म चित्रकार बन्नमा”-रामचन्द्र श्रेष्ठ – रोल्पा समाचार
२०७४ माघ २७, शनिबार १४:३९ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७४ माघ २७, शनिबार १४:३९ गते
२०७४ माघ २८ माकला क्षेत्रप्रति समाज र राज्यको दृष्टिकोण, चित्रकला यात्राका आरोह–अवरोह, कला क्षेत्रका चुनौती र अनुभव लगायत चित्रकलाप्रति युवायुवतीको आकर्षणको विषयमा केन्द्रित रहेर रोल्पा समाचार साप्ताहिक लागि यस पत्रिकाका कार्यकारी सम्पादक रेशम बि.क.ले गर्नुभएको कुराकानीको सार सङ्क्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रायः दैनिकजसो असङ्ख्य नेपाली युवा युवतिहरु वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशिइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु नितान्त भिन्न विषय हो । अझ स्वदेशमा नै बसेर स्वरोजगार बन्नु झन चुनौतीपूर्ण काम हो । तर सिद्धहस्त चित्रकार रामचन्द्र श्रेष्ठका लागि यो सम्भव छ । उहाँ एउटा फरक पहिचान बनाउँदै र अनवरत कलाकर्ममा लाग्दै आउनुभएको छ । त्यसैकारण सरकारले उहाँलाई २०५२ मा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट पुरस्कृत समेत ग¥यो । आफ्नै गाउँ समाजमा रहेर चित्रकला र मूर्तिकलाको साधनामा निरन्तर लाग्दै आउनुभएको चित्रकार श्रेष्ठले थुप्रै सम्मान पत्र, प्रसंशा पत्र र पुरस्कारहरू पाइसक्नु भएको छ । रोल्पा समाचार साप्ताहिक पत्रिकाले पनि उहाँलाई आफ्नो दशौं र एघारौं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उहाँको सिर्जनाको कदर स्वरुप सम्मान गरेको थियो । थुप्रै अवसरहरुमा समेत उहाँ सम्मानित र पुरस्कृत भइसक्नुभएका श्रेष्ठ कलाक्षेत्रका राष्ट्रिय प्रतिभा नै हुनुहुन्छ ।
 आफ्नो परिचयसहित कलाबारे केही बताइदिनु हुन्छ कि ?
म रोल्पा जिल्लामा जन्मेको एउटा चित्रकार हुँ । रामचन्द्र श्रेष्ठ नाम हो मेरो । कलाकारिता मेरो कार्यक्षेत्र हो । समग्रमा, हरेक मानिसको आ–आफ्नो जनजीवीका भए जस्तै कला क्षेत्र पनि एउटा जिविका गर्ने उद्योग हो । यो सौन्दर्यप्रधान उद्योग हो । सुन्दर कलाकृतिहरू निर्माण गरिन्छ । कलाका विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् । मेरो क्षेत्र चित्रकला र कहिलेकाहीं मूर्तिकला पनि हो ।
 आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
त्यसरी व्यस्त हुनै पर्ने त होइन । तैपनि मेरा फाट्टफुट्ट लेखन कार्यहरू (साइनबोर्ड, ब्यानर, भित्तेचित्र र जनचेतनामूलक डिस्प्ले बोर्डहरू) निर्माण कार्य जारी राखेको छु । कहिलेकाहीँ लोगो डिजाइन र साहित्यिक क्षेत्रका कृतिहरुका लागि आवरण निर्माण गर्छु ।
 तपाई यस चित्रकला क्षेत्रमा कसरी प्रेरित हुनुभयो ?
सबैका आ–आफ्नै रुचिका विषय हुन्छन् । पढ्दै र बढ्दै जाने क्रममा कोही खेलाडी हुन्छन् । कोही नृत्यकार त कोही पत्रकार हुन्छन् । कोही गायककार र कोही साहित्यकार भए झैं धेरै विविध विधाहरू छन् । मेरो रुचि चित्रकारिताप्रति बस्यो । कष्टसाध्य जीवन नै प्रेरणाको स्रोत बन्यो । अर्को कुरा म यस क्षेत्रमा लाग्नुमा मेरी स्वर्गीय आमाको निकै महत्वपूर्ण देन छ । आमाकै देन र प्रेरणाले चित्रकार भएको हुँ ।
चित्रकला क्षेत्रका तपाईंका अनुभव उल्लेख गरिदिनु हुन्छ, कि ?
जब म कला क्षेत्रमा लागेँ । चित्रकारिता गर्दा निकै मज्जा लाग्यो । बिस्तारै हातहरू अभ्यस्त हँुदै गएपछि त झन् राम्रा–राम्रा चित्रहरू बन्न थाले । अनि त निकै आनन्दित र पुलकित भएँ । विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै निरन्तर यो क्षेत्रमा लागिरहेकै छु । कला क्षेत्रका लागि भनेर पढाइ, जागीर, व्यापार, उद्योग केही पनि सोचिनँ । अब त कला क्षेत्र मेरो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ ।
चित्रकलाबारे के कस्तो तालिम प्राप्त गर्नुभयो र कहिलेदेखि व्यावसायिक बन्नुभयो ?
म आफ्नै स्व–अध्ययन र स्वतःस्फूर्त रुपमा कला क्षेत्रमा लागेको हुँ । कुनै पनि तालिम वा अवसर प्राप्त नगरिकनै म कला क्षेत्रमा लागेको चित्रकार हुँ । व्यवसायको नाममा सामान्य जीविकोपार्जन मात्र हुन सकेको छ । चित्रकला एउटा सिर्जनात्मक क्षेत्र भएकाले यसबाट अन्य व्यापार जसरी प्रशस्त आयमूलक क्षेत्र बन्न सकेन ।
चित्रकला क्षेत्रमा तपाईले कुन–कुन पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ ? पुरस्कृत वा सम्मानित हुँदा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?
म २०५२ सालमा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएँ । त्यसअघि र पछि गरी विभिन्न अवसरहरुमा पनि सम्मानित, पुरस्कृत र प्रशंसित हुँदै आएको छु । यसरी पुरस्कृत, सम्मानित र प्रशंसित हुन पाउँदा गर्वको अनुभूति हुन्छ ।
रोल्पा जिल्लामा चित्रकला क्षेत्रको अवस्थासँगै यसको माग कस्तो छ ?
समग्र कला क्षेत्रमध्ये चित्रकला एकदम नाजुक छ । किनकि चित्रकलाका बारेमा न कुनै बहस हुन्छ, न त कुनै विमर्श र छलफल हुन्छ । बरु राजधानीतिर चित्रकलाको व्यापक चर्चा, समीक्षा र विश्लेषण चल्नुका साथै ख्यातीप्राप्त कलाकार हस्तीहरुका हप्तैपिच्छे कला प्रर्दशनी भइरहेको हुन्छ । लाखौं मूल्यमा कला बिक्री भइरहेको बारे पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । त्यहाँ त कला मर्मज्ञहरू पनि थुपै्र हुनुहुन्छ । तसर्थ राजधानी र विकसित सहरहरुका कला क्षेत्रका दाँजोमा रोल्पा जिल्लाको कला क्षेत्र दयनीय छ । प्रतिभा भएर पनि ओझेलमा परेकालाई अवसर दिएर अगाडि ल्याउन सकेमा रोल्पाको कला क्षेत्रको भविष्य सुन्दर एवं उज्वल छ । गुणस्तरीय कला निर्माण गर्दै स्वस्थ प्रतिष्पर्धाबाट अगाडि बढ्न सकेमा मात्र रोल्पाले पनि कला क्षेत्रबाट ठूलो फड्को मार्न सक्नेछ । तब मात्र रोल्पामा चित्रकलाको माग व्यापक हुनेछ ।
तपाईले चित्र निर्माण गरे वापत शुःल्क कसरी लिने गर्नुभएको छ ?
व्यावसायिक मूल्य भए पो शुःल्क निर्धारण हुन्थ्यो । कलाको मूल्य साइनबोर्ड, ब्यानर र भित्तेलेखन लगायत अन्य व्यवसायको जस्तो मूल्य निर्धारित हुन्न । मैले बनाएका कतिपय चित्रको प्रशंसासँगै उच्चित मूल्य पाउँदा खुशी लाग्छ ।
जिल्लामा चित्रकलाप्रति युवायुवतीको आकर्षण कस्तो छ ?
रोल्पा जिल्लामा चित्रकलाप्रति युवाहरुको आकर्षण उत्साहजनक छ । तर छोटो समयमा कम लगानी गरेर धेरै आम्दानी गर्ने क्षेत्र नपरेकाले होला, यस क्षेत्रप्रति उनीहरू उदासीन रहेका देखिन्छन् ।
रोजगारीका निम्ति मानिसहरू दैनिकजसो विदेशिनुलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
देशमै बसी केही गरौं भन्ने भावना नभएको होइन । तर बेरोजगारी र आर्थिक अभावकै कारण र आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार स्वेदशमै ‘रोजगारी’ नपाएकै कारणले बाध्यतावश विदेशिुन परेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । स्वेदेशमै रोजगारी पाएर आत्मनिर्भर हुने अवसर पाए स्वर्गसमान अनि प्राकृतिक र साँस्कृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यो देश र गाउँ समाज छोडेर विदेशिनु कसलाई रहर होला र ?
कसैले यो चित्रकला (आर्ट सम्बन्धी ज्ञान) सिक्न इच्छा राखेर आएमा के भन्नुहुन्छ ?
रुचि र इच्छाशक्ति भएमा नसिक्ने भन्ने हँुदैन । तर गुणस्तरीय र छिटो सिकाईमा फरक छ । किनकि गुणस्तरीय सिकाइमा कला क्षेत्रमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरी दक्षता हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि तन, मन, ध्यान र एकाग्रताको आवश्यकता पर्दछ । तर यो कला क्षेत्र सिक्न अलि अपठ्यारो भएपनि असंभव भने छैन ।
डिजिटलमय युगमा कला निर्माणको सम्भावनासँगै यसका चुनौती के–के देख्नुभएको छ ?
मेरो विचारमा भन्नुपर्दा केही असर पर्नेवाला छैन । बरु साइनबोर्ड र ब्यानर निर्माण कार्यमा तीव्रता आउला । कला त सिर्जना हो । सिर्जित कलालाई डिजिटल प्रविधिबाट प्रतिलिपि बनाई छाप्न सकिने मात्र हो । डिजिटल प्रविधि कला छाप्ने एउटा माध्यम मात्र बनेको छ ।
 के तपाईँ चित्रकला कर्मबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
कुन मानेमा सन्तुष्ट हुने ! कला साधनामा त झन नयाँ सिर्जना गर्न ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । कला सिर्जनामा तल्लीन भइरहेको बेला परम् आनन्दको अनुभूति हुन्छ । तर आर्थिक पक्ष सबल नहुनु र कला क्षेत्रको विकासका लागि राज्य (सरकार÷स्थानीय तह) उदासीन हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । आय आर्जन त नभनौं, जीविकोपार्जनका लागि कहिलेकाहीँ साइनबोर्ड, ब्यानर र भित्ते लेखन जस्ता कार्यबाट नै जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तपाईको बुझाईमा जीवन के हो ?
जीवन सुख दुःखको संगम हो, जीवन संघर्ष हो र अवसर पनि हो । युवा पुस्तालाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
युवाहरू समाज र देशकै बलिया खम्बा हुन् । उन्नत विचार र सकारात्मक सोँच लिएर युवाहरू अगाडि बढ्नुहोस् । स्वदेशमै संघर्ष गरेर समाज र राष्ट्रलाई अघि बढाउन सशक्त बन्नुहोस् । देशको कला संस्कृतिको उन्नयन गर्दै परसंस्कृति ग्रहण रोक्ने काममा लागीपर्नुहोस् ।
 अन्तमा यस पत्रिका मार्फत् भन्नु पर्ने केही छ, कि ?
रोल्पा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा अनगिन्ती प्रतिभाहरू छन् । सबैले तपाईको पत्रिकामा स्थान पाऊन् । जसमध्ये यस पटक एउटा चित्रकला तर्फको प्रतिभालाई तपाईको पत्रिकामा स्थान दिई आफ्ना मनका कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो । त्यसका लागि तपाई लगायत तपाईका यस पत्रिकाका सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मलाई कला क्षेत्रमा क्रियाशील बनाइराख्न र कला क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हुने नागरिक, समाजसेवी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, संघ–संस्था लगायत सबै क्षेत्रलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।